e.l.f.Makeup Remover Cleansing Clothes | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
e.l.f. Makeup Remover Cleansing Clothes
နူးညံ့သော အ၀တ်စလေးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း
မျက်နှာအား အစွမ်းကုန် သန့်စင်ပေးခြင်း
ဓာတ်မတည့်သော အသားအရည် ပိုင်ရှင်များပါ သုံးနိုင်ခြင်း
တစ်အိတ်တွင် အခု ၂၀ ပါဝင်ခြင်း
အကောင်းဆုံး make up remover လေးပါ။
အ၀တ်စပုံစံမျိုးက မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ သုတ်လိုက်တဲ့အခါ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်မနေပဲ နူးနူးညံ့ညံ့ရှိပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အညစ်အကြေးနဲ့ မိတ်ကပ်အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးပြီး မျက်နှာကို နူးနူးညံ့ညံ့လေးဖြစ်စေတယ်။ သုံးလို့အရမ်းကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
Infused with Aloe Vera Extract for moisturzing.
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် Makeup Remover Cleansing Clothes